American Hellebore (ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » American Hellebore (ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင်)
American Hellebore (ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင်) ကဘာလဲ။
ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
American hellebore သည် မြန်မာလို ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင်ဟုခေါ်သော အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အဖူးနှင့် အမြစ်ကို ဆေးဖော်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ American hellebore ပင်သည် ရောမခေတ်တွင် အဆိပ်မြှားများပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကို သွေးတိုးကျရန် အသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း သုတေသနပြုလုပ်ထားသည်မှမရှိပေ။
ဤဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသော်လည်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ သို့သော် ဤအပင်သည် သွေးတိုးကျခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းအဂါၤများသို့ သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေခြင်းစသော နှလုံးသွေးကြောနှင့် ပတ်သတ်သော အာနိသင်များရှိကြောင်း လေ့လာမှုအချို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော သွေးတိုးရောဂါကို ကုသရန် စိတ်ငြိမ်ဆေးအဖြစ်အသုံးခဲ့ကြသည်။
ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဤဆေးပင်သည် အဆိပ်ဖြစ်စေလွယ်သောကြောင့် အသုံးနည်းသည်။ များသောအားဖြင့် ဤဆေးပင်ကို အသုံးမပြုကြပဲ စိတ်ချရသော အခြားသော ကုသနည်းများကို သုံးကြသည်။ ဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်သော ပစ္စည်းများကို အေးပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် ထားသင့်သည်။
ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ဤ ဆေးပင်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ နို့တိုက်မိခင်များနှင့် အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးများတွင် အသုံးမပြုရပါ။ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းပြသနာရှိသူများနှင့် နှလုံးရောဂါသမားများတွင် လည်း အသုံးမပြုရပါ။
ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ဤဆေးပင်သည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောကြောင့် ပမာဏများခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိစေသည်။ သေဆုံးနိုင်ခြင်း အပြင် အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိသည်။
• ပါးစပ်၊ လည်ပင်းများ ယားယံခြင်း
• ပျို့အန်ခြင်း၊ဝမ်းပျက်ခြင်း၊နှင့် အစာမျိုရခက်ခြင်း
• အာရုံကြောထိခိုက်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ အကြောဆွဲခြင်း။
ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ဤဆေးပင်သည် နှလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ပိုးသတ်ဆေးအချို့သည် ဤဆေးပင်၏ အာနိသင်ကို တိုးစေသောကြောင့် တွဲဖက်အသုံးမပြုသင့်ပါ။
ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ဤဆေးပင်သည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက် အမြစ်ကို ပြုလုပ်ထားသော အမှုန့်ကို ဝ.၀၀၂ ဂရမ် မှ ဝ.၁ ဂရမ်အတွင်းသာ အသုံးပြုပါ။
ခရစ်စမတ်နှင်းဆီပင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Black hellebore. http://www.emedicinehealth.com/black_hellebore/vitamins-supplements.htm. Assessed July
Hellebore. http://www.drugs.com/npp/hellebore.html . Assessed July 18, 2016Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Printversion. Page 22.
American hellebore. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-822-american%20hellebore.aspx?activeingredientid=822&activeingredientname=american%20hellebore. AssessedJuly 18, 2016.